Ciidamada amniga Puntland oo maanta si rasmi ah uga hawl bilaabay xaafadda Garsoor. – Radio Daljir
Ciidamada amniga Puntland oo maanta si rasmi ah uga hawl bilaabay xaafadda Garsoor.
Galkacyo, Oct 15 ? Ciidamada nabadgalyada ee dawladda Puntland ayaa maanta oo Sabti ah si rasmi ah uga hawl bilaabay goobahoodii ciidanka bilaysku ay ku laahaayeen xaafadda Garsoon ee magaalada Galkacyo kuwaasi oo muddo faaruq ahaa, kaddib markii halkaasi ay ka dhaceen shaqaaqooyin xooggani.
Ciidanka ayaa dib hawlahoodii shaqo uga bilaabay saldhiggii ay ku lahaayeen warshaddii hore ee Gellayda iyo koontaroolka koonfureed ee magaalada Galkacyo, goobahaasi oo halbawle u ah amniga guud magaalada, xigana cirifka laga soo galo magaalada marka laga yimaado gobollada dhexe iyo koonfurta Soomaaliya.
Qorshaha ciidanka amnigu ay ku tageen fariisimadoodi xaaladda Garsoor ee magaalada Galkacyo ayaa qayb ka ah hirgalinta qoraal-heshiiseed dhawaan laga soo saaray xiisado colaadeed oo ka dhacay xaafaddaasi taasoo dhalisay khasaaro dhimasho iyo dhaawac iskugu jiray.
Xaflad lagu maamuusayey arrintaasi la xiriirta dib u hawl-bilaabidda bilayska ee xaafadda Garsoor, ayaa lagu qabtay shalay koontaroolka koonfureed ee magaalada Galkacyo taasoo ay ka soo qaybgaleen mas?uuliyiin dawladeed oo iskugu jira heer dawlad dhexe iyo heer gobol kuwaasi o halkaasi ka jeediyo khudbado dhiirr-galin nabadgalyo iyo la shaqayn bilays iskugu jira.
Tallaabadaan ayaa ahayd mid horay loo filayey hirgalinteeda, hase ahaatee waxaa xilligaasi soo gaarsiiyey tashiyo iyo turxaan-bixin ku aaddanayd habka iyo kala horraysiinta shaqooyinkii dhimmanaa.
Guddi gaar ah oo loo igmaday dhammaystirka iyo fulinta hawlihii is-faham ee laga gaaray Garsoor ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku hawlanaa qorshaynta qaabkii ficil loogu baddali lahaa waxyaabihii la isla meeleeyey taasoo ay ugu horraysay hawlaha bilayska ee shalay la meeleeyey.